Ihe omume mmemme na nke elu - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Mmemme mmemme na nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Mmemme Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Nlekọta na Ụlọ Akwụkwọ Kasị Elu
BLI na-enye ọtụtụ ihe omume maka ndị na-eto eto na-eto eto.
Ụfọdụ nhọrọ anyị bụ:
FLAP (mmemme mgbasa ozi asụsụ mba ọzọ) - mbipụta oge okpomọkụ na nke Winter
Usoro mmemme - mbipụta oge okpomọkụ na nke Winter
Ahụmalite akwụkwọ ma ọ bụ Ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Chọta akwụkwọ na Canada
Ahụmalite Igodo na Ụlọ Akwụkwọ Kasị Elu
BLI na-enye ndokwa maka ụmụ akwụkwọ elementrị na nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-achọ ịmụ mba ọzọ maka obere oge. A na-enye ihe omume anyị n'asụsụ Bekee ma ọ bụ French. Ị nwere ike ịga maka ahụmahụ ka njọ ma were usoro ịme asụsụ abụọ. Ị ga-abanye n'ime ụlọ akwụkwọ elementrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, na-ebi na ezinụlọ Canada ma nwee ohere ịbanye na ọrụ ndị na-akpali akpali nke BLI.
Bie njem ahụ
BLI nwere nkwekọrịta na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ elementrị na ụlọ akwụkwọ dị elu na Montreal na Quebec City iji nye Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Afọ. E mepụtara usoro ihe ọmụmụ nke BLI maka ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ ndị chọrọ ibi ndụ zuru ezu n'asụsụ, ọmụmụ ihe omumu na omenala na Canada.
Ụmụ akwụkwọ ga-etinye aka na ụlọ akwụkwọ elementrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ga-ebi na ezinụlọ Canada.
E mepụtara usoro ihe mgbochi BLI iji nye ụmụ akwụkwọ nwere usoro ọmụmụ nke ga-enyere ha aka imeziwanye nkà asụsụ ha ma tinye ha na usoro agụmakwụkwọ Canada na omenala Canada tupu ha abanye ụlọ akwụkwọ elementrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Ndụ mmụta · Ịmụ ihe mmụta
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịme otu ìgwè na Canada, kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịhazi ihe ọ bụla n'ime mmemme ahụ dị n'elu ma ọ bụ imewe nke na-agbanwe maka mkpa nke ìgwè gị. Ma nnukwu ma ọ bụ obere, anyị ga-emepụta ihe ngwọta maka gị.
Ihe ụmụ akwụkwọ anyị na-ekwu
Enwere m nnọọ obi ụtọ na ebe m họọrọ. Ọ dị ukwuu. Enwere m ihe niile dị m mkpa iji nwee ahụ iru ala.
Onye Mmụta nke Bekee - Ịtali
Ahụmahụ m n'ogige okpomọkụ na Montreal dị oke mma! Ọ bụ nrọ mezuru! Ahụmahụ m agaghị echezọ ma ọlị!
M zutere ọtụtụ ezi ndị enyi si n'akụkụ ụwa nile, chọtara ọtụtụ ihe ma mụta ọtụtụ ihe n'oge m nọrọ.
Montreal dị ịtụnanya.
Onye Mmụta Bekee - Mexico
Iso òkè n'ogige oyi nke BLI dị egwu. Enwere m ezigbo ọchị. M zutere ọtụtụ ndị, gara ebe a na-agaghị echefu echefu dịka Niagara Falls na New York City, kere òkè n'ọtụtụ ihe omume dị ka tubing, nkịta na-akwagharị, na ọtụtụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ ihe omume oyi.
Enwere m klas ndị French na ndị nkụzi m dị egwu!
Aga m alaghachi n'afọ ọzọ.
Onye Mmụta French - Switzerland
Mba onye si